IGauteng yaseGeorgeown GPA, izikolo ze-SAT kunye neMISEBENZI
Izibalo zeeNyuvesi zaseGeogetown
IYunivesithi yaseGeorgetown ikhethileyo kakhulu ngenani lokuwamkelwa kweepesenti eziyi-17 kuphela ngo-2016. Phantse bonke abafundi abavunyelwe ukuba babe ne-GPA kunye ne-SAT / ACT izikolo eziphezulu ngaphezu komyinge. Abafaki izicelo abaphumeleleyo, nangona kunjalo, badinga ngaphezu kwamanyathelo amanani anamandla. IYunivesithi inamkelwa ngokubanzi, ngoko kuya kufuneka usebenzise iincwadana ezinamandla zesicelo, iincwadi zokucebisa, kunye nemisebenzi yexesha.
Kutheni Unokukhetha iYunivesithi yaseGeorgetown
IGeorgetown iyunivesithi yangasese ye-Jesusit eWashington, DC Indawo esikolweni kwisikhulu-mali iye yaba negalelo kubemi belizwe labafundi bamazwe ngamazwe, kunye nokuthandwa kwe-International Relations ( kubone ezinye iikholeji ze-DC ). UBill Clinton uphuma phakathi kwee-alumni eziphawulekayo zaseGeorgetown. Abafundi abangaphezu kwesiqingatha baseGeorgetown basebenzise amathuba amaninzi ekufundeni kwamanye amazwe amathuba, kwaye i-yunivesithi yakha yavula i-campus eKatar.
Ukufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal, iGeorgetown yanikezwa isahluko se- Phi Beta Kappa . Kwi-front front, iGeorgetown Hoyas incintisana kwiCandelo le-NCAA I- Conference East enkulu . Ngamandla akhe amakhulu, iYunivesithi yaseGeorgetown yenza uluhlu lwethu lweeyunivesithi eziphezulu zamaKatolika, kwiiyunivesithi zelizwe ezifanelekileyo , kunye neikholeji ze-Middle Atlantic eziphezulu .
IGeorgetown GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
IGowegetown University GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukungena. Ukuze ubone ixesha langempela legrafu kwaye ubale amathuba okungena eGeorgetown, tyelela iKappex.
Ingxoxo yeMigangatho yokuVunywa kweGeorgetown:
IYunivesithi yaseGeorgetown iyavuma malunga nomntu omnye kwabahlanu abafake izicelo. Kulo grafu ngasentla, amachaphaza ahlaza okwesibhakabhaka noluhlaza amela abafundi abangenayo, kwaye uyabona ukuba abaninzi abafake izicelo abafika eGeorgetown babesondele kwi-4.0 GPAs, izikolo ze-SAT (RW + M) ngaphezulu kwe-1250, kunye nama-composite scores angaphezulu kwama-26. ukuba kukho ininzi ebomvu efihliweyo phantsi kwebala elihlaza okwesibhakabhaka nokuluhlaza kwigrafu. Abafundi abaninzi abaneGPA eziphezulu kunye namanqaku okuvavanya abaphumelelanga ukungena eGeorgetown. Amathuba akho aya kuba ngcono nge-ACT yomxholo we-30 okanye ngaphezulu kunye nomlinganiselo we-SAT ohlangeneyo we-1400 okanye ngaphezulu.
Ukwahlukana phakathi kokwamkelwa kunye nokugatywa kuya kufuthi kuhla kumanyathelo angenani. IGeorgetown, njengamanye amazwe ephakamileyo aphezulu, iyakwamkelwa ngokupheleleyo , kwaye abantu abamkelekileyo bafuna abafundi abazisa kwi-campus ngaphezu kwamabanga amabakala kunye namanqaku okuvavanya. Iingqinisiso zesicelo sokunqoba , iincwadi eziqinileyo zinconywa , ikharityhulam yekharityhulam ephakamileyo , kunye nemisebenzi yolonwabo kwinqanaba kunye namava omsebenzi zizinto zonke ezibalulekileyo zesicelo. Isicelo sifuna iincwadana ezimfutshane ezintathu: esinye esikolweni okanye umsebenzi wehlobo, omnye ngawe, kwaye enye igxile esikolweni okanye kwiikholeji yaseGeorgetown osebenza kuyo. Qaphela ukuba iGeorgetown yenye yeeyunivesithi ezimbalwa eziphezulu ezingasebenzisi ISicelo esisodwa.
IYunivesithi yaseGeorgetown idinga ukuba bonke abafaki-sicelo bonyaka bokuqala bathethe udliwano-ndlebe kunye ne-alumnus yendawo ngaphandle kokuba oku kungenakwenzeka. Udliwano-ndlebe luya kwenzeka kufuphi nekhaya lakho, kungeyunivesiti. Udliwano-ndlebe ayingabalulekanga inxalenye ebalulekileyo yesicelo sakho, kodwa inceda iyunivesiti ukuba ikwazi kakuhle, kwaye ikunika ithuba lokugxininisa iitalente kunye neminqweno engabonakali ngokulula kwisicelo sakho. Udliwano-ndlebe lithuba elihle lokuba ufunde kabanzi ngeGeorgetown. Qinisekisa ukuba ulungele ukuphendula imibuzo edlalwa ngokudliwano-ndlebe ngaphambi kokubeka unyawo kwigumbi lokudliwano-ndlebe.
Kwakhona uqaphele ukuba isimo sakho semveli singadlala indima kwinkqubo yokungena. Isicelo saseGeorgetown sicela ukuba ubhale phantsi naziphi na izalamane eziphumelele eGeorgetown okanye ngoku ziya kwiyunivesiti.
Ukubonisa intsingiselo mhlawumbi ibaluleke kakhulu eGeorgetown kunezinye iindidi ezininzi eziphezulu. Ngokomzekelo, ukusebenzisa i-Action Early ukuya eGeorgetown akuyikunyanisekisa ithuba lakho lokufumana imvume, kodwa ukusetyenziswa kwangaphambili kwizikolo ze-Ivy League kwandisa amathuba akho encwadi yokuwamkela ngokulinganayo. Oko kwathiwa, ufuna ukubonisa ukuba ungokoqobo ngeGeorgeown, kwaye isicatshulwa sakho yesicelo esikolweni yindawo enhle kakhulu yokwenza njalo. Qinisekisa ukuba ithetha ngokucacileyo kwiGeorgeown, kungekhona isinki esiphezulu esingafakwa kwezinye izikolo.
Isikolo sokwamkela iYunivesithi yaseGeorgetown: iipesenti ezili-17
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 660/760
ISAT Math: 660/760
UMTHETHO WOMTHETHO: 30/34
UMSEBENZI IsiNgesi: 31/35
UMTHETHO UMathe: 28/34
Ukuze ufunde kabanzi ngeGeorgetown, ii-GPA zesikolo esiphakamileyo, izikolo ze-SAT kunye nama-ACT, amanqaku angancedisa:
Iprojekthi yeeNgcaciso zeNyuvesi yaseGeorgetown
Olongezelelweyo Ulwazi lweYunivesithi yaseGeorgetown
Imigangatho yokumkelwa kweGeorgeown ngokucacileyo iphezulu kakhulu, kodwa qiniseka ukuqwalasela ezinye izinto ezifana neendleko, uncedo lwezemali kunye namazinga okuphumelela xa ukhetha isikolo. Kuphela malunga nesiqingatha sabafundi baseGeorgetown bafumana uncedo lwe-yunivesithi.
Ubhaliso lwabonke: 18,525 (7,453 abafundi bee-graduate)
Ukutshatyalaliswa kwesini: ama-44 ekhulwini ngamadoda / ama-56 ekhulwini amabhinqa
Imfundo kunye neMali: $ 50,547
Igumbi neBhodi: $ 14,962
Ezinye iindleko: $ 2,604
Iindleko ezipheleleyo: $ 69,313
IYunivesithi yaseGeorgeown yeNcedo lwezeMali (2015 - 16)
Ipesenti yabafundi abatsha abafumana inkxaso: ama-53 ekhulwini
Izibonelelo: iipesenti ezingama-42
Imali: iipesenti ezingama-27
Izibonelelo: $ 40,346
Imali: $ 6,518
I-Majors Eyaziwayo kakhulu: i- Economics, isiNgesi, iMali, ubudlelwane bamazwe ngamazwe, ukuThengisa, ukuNyango, iNzululwazi yezopolitiko, i-Psychology
Ukugcinwa kwabafundi beNyaka yokuqala (abafundi bexesha elipheleleyo): iipesenti ezingama-96
Ireyithi yokuQinyezelwa kweNyaka eyi-4: ipesenti ezingama-90
Ireyithi yoNyaka weeNgqesho ze-6: ama-94 ekhulwini
NjengoGeorgeown University? Emva koko Hlola ezinye iiyunivesithi eziphezulu
Ukuba ufuna iyunivesithi ephezulu yamaKatolika, ezinye iinketho ziquka iKholeji yaseBoston , iKholeji ye-Holy Cross , kunye neYunivesithi yaseTeam Dame .
Kulo uninzi lwabafakizicelo beGeorgeown, udumo lwezikolo kunye neenkqubo ezizimeleyo zemfundo ziyilo elikhulu kunezozisi ezingamaKatolika. Abafakizicelo abaninzi eGeorgetown basebenza kwiYunivesithi yaseYale, kwiYunivesithi yaseNyakatho-ntshona kunye naseYunivesithi yaseStanford
Ngenxa yokuba iYunivesithi yaseGeorgetown ikhethileyo kwaye abaninzi abafake izicelo bafunyenwe, kufuneka ningaluboni njengomdlalo okanye ukhuseleko lwesikolo. Njengesikolo se-Ivy League, iGeorgetown kufuneka ithathelwe ingqalelo. Ngokuqinisekileyo ufuna ukufaka isicelo kwiikholeji ezizibini ezinomgca we-admission low ezenzweni ukuqinisekisa ukuba awufumani ngeencwadi ezingamkelekanga. Ithemba ngeendaba ezilungileyo ezivela eGeorgetown, kodwa zilungele ukuba isigqibo singasebenzi phantsi kwakho.
> Umthombo Weenkcukacha: Igrafu yothando ngeCappex; enye idatha evela kwiziko leSizwe leeNkcukacha zezeMfundo
USC GPA, SAT kunye ne-ACT Data
I-Chapman GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-DePauw Yunivesithi ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yaseBryant, i-SAT kunye ne-ACT
I-Kettering University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ikholeji ye-Wheaton i-Massachusetts GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yaseVirginia GPA, i-SAT, kunye ne-ACT Data
I-Glossary yezobugcisa: Ukupenda kweMonochrome
10 Iimvumi zeTV ezihamba phambili ze-90s
UAlexandre Gardner, umPhathi weMfazwe woLuntu
Umgaqo-nkqubo wamazwe angaphandle eMelika
Amazing Tall Towers - Abaqhubi beZakhiwo
Indlela Yokuthatha Amanqaku eBhalojiji
Ileta ye ngcebiso
Imithetho okanye iMigaqo yeSteno
IQunivesithi yeGQPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-THOMPSON - Name Name & Origin
Vitis vinifera: Imvelaphi yeMidiya yasekhaya
Ephezulu Eric Clapton Iingoma zee-80s
Yayiyiphi iVespasian eyaziwayo ngamazwi okugqibela?
Isiseko seSithili seShishini seNtloko
Indlela yoHlelo lweSiqendu esichazayo
Indlela yokuhlawula i-Sailboat